China Chipboard Screws Kugadzira uye Fekitori | Zhanyu
KABHAYI TAYI ZVIMWE
Hex musoro wega kuzvicheka screws
Hex socket bhaudhi mukombe musoro
Truss musoro kuzvipira kuchera sc ...
· Saizi: M3.5 / M4 / M5 / M6
Pedzisa: Nhema phosphorus / Zinc yakafukidzwa
· Ruvara: Dema / Muchena / Yero
· Zvinyorwa: C1022A
Kupa: 25kg Bhegi / Bhokisi riine katoni
Chipboard screws iri mhando yechigadzirwa iyo inokodzera yemagetsi chishandiso yekumisikidza mushure mekupisa kurapwa maitiro. Inonyanya kushandiswa kubatanidza uye kusunga pakati pemapuranga emapuranga uye pakati pemahwendefa ehuni uye mahwendefa esimbi matete. Iyo saizi m3-m6, zvinhu zvakakwirira simba c102a, kurapwa kwepamusoro kwakakurudzira, iwo ruvara rwacho kazhinji kazhinji yero, bhuruu uye chena.
Mune iyo rese fastener indasitiri, ichi chigadzirwa chakakosha seyakaoma madziro sikuru uye ine hombe yekutengesa vhoriyamu. Inoshandiswa zvakanyanya mukugadzira fenicha uye mamwe maindasitiri, asi ichiri kungogumira mumusika we DIY. Parizvino, vatengi vepamba vanotenga izvi zvakasiyana muzvivakwa supermarket, zvinonyanya kushandiswa kumisikidza njanji, hinji (senge 3.5 * 16, nezvimwewo), kuisirwa hove kuwedzera (senge 4 * 40, nezvimwewo), uye kutsiva huni screws yekumisikidza uye kugadzira fenicha uye makabati. Hunhu hwacho huri nani, iyo Yuan Ling ndiro inogadzirwa neShanghai hangtou standard zvikamu fekitori iri nani uye yemhando yekutakura mutengo iri nani Izvo zvine hupfumi uye hupfumi muzvinhu zvese. Iyo claw yekucheka muswe fiber bhodhi sikuruu ndeye yakavandudzwa chigadzirwa cheyakajairwa fibreborn sikuruu. Inonyanya kuve yakakwenenzverwa kubva mukugadzirwa kwetambo, ichitsvaga yakakwira kuchera kumhanya, uye kugadzirisa dambudziko rekutsemuka nyore kunokonzerwa nekushandiswa kwehuni hwakaoma, uye zvemukati zvemukati zvakakwirira.
Kusvika padanho rakakura, rinogona kutsiva kushandiswa kweyakajairika huni sikuru (huni sikuru pasina kupisa kurapwa). Panguva imwecheteyo, screws dzehuni dzinogadzirwa nehunyanzvi hwekudzikira tsvimbo inotanga kufemerwa neAIDS kuenda kunzira, iyo isingangoponesa zvigadzirwa chete, asi zvakare inoita kuti tambo ipinde.
Pashure: Yakakora tambo imwechete tambo yakaomawallwall screw
Zvadaro: CSK musoro unozvipira kuchera screws
Truss musoro kuzvipira kuchera screws
Yakajairwa C-chikamu simbi yeunistrut inopisa-di ...
High yepamusoro kabhoni simbi DIN934 Hexagon nzungu m3 ...
Cable tireyi zvishongedzo, chengoro mabhaudhi, flange ...
Carbon simbi Hexagon bhaudhi
Din 741 Hardware, Rigging Zinc kuifukidza kabhoni St ...
Handan Yongnian Zhanyu Fastener Kugadzira Zvigadzirwa Co., Ltd.